Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် ပွင့်လင်းမိုးဖုံး ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပွင့်လင်းမိုးဖုံး ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ပွင့်လင်းမိုးဖုံး Výrobce, dodavatel, vývozce s Factory v Taiwan - ပွင့်လင်းမိုးဖုံး, ပွင့်လင်းမိုးဖုံး výrobce, ပွင့်လင်းမိုးဖုံး dodavatel, ပွင့်လင်းမိုးဖုံး vývozci, ပွင့်လင်းမိုးဖုံး vývozce, Taiwan ပွင့်လင်းမိုးဖုံး, ပွင့်လင်းမိုးဖုံး továrna, ပွင့်လင်းမိုးဖုံး výrobci, ပွင့်လင်းမိုးဖုံး Dodavatelé, ပွင့်လင်းမိုးဖုံး výrobce, ပွင့်လင်းမိုးဖုံး OEM, ပွင့်လင်းမိုးဖုံး továrny, ပွင့်လင်းမိုးဖုံး výrobci
ပွင့်လင်းမိုးဖုံး výrobce, dodavatel, vývozce, továrna Taiwan
ပုံစံ - 2-8,EVA6
EVA သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်း,အဆိုပါ poncho မဟုတ်တဲ့ဖြစ်ပါသည်-အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ကင်းဓါတုသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်အနံ့မရှိဘဲနှင့်အန္တရာယ်ကင်း.
စိုစွတ်သောရာသီဥတုတွင်အလုပျသမိုဃ်းကိုရွာစေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပူဇော်ဖို့ drawstring နှင့်အတူ hood ကိုဒီဇိုင်း
အလင်းကိုအလေးချိန်နဲ့အပျော့:အဆိုပါပေါ့ပါးခရီးဆောင်မိုဃ်းကိုရွာစေ poncho သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသုံးပြုရန်အိတ်အတွက်ထုပ်ပိုးနိုင်သည့်အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ပြန်လည် အသုံးပြု. ရသောဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါမိုး ponchos အလွန်အမင်းရေစိုခံများနှင့်ခရီးဆောင်များမှာ.
တဦးတည်းရဲ့အရွယ်အစားအားလုံး fit နိုင်ပါတယ်,အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများလူကြီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်သက်ဆိုင်သော
အဆိုပါမိုး poncho ပြန်သုံးခြင်းနှင့်အမြန်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ခြောက်သွေ့အတွက် features တွေရနိုင်.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ:30 ရက်%အပျငှေ,ဝယ်လက် L ကိုထုတ်ပေးသင့်တယ်/အဖြစ်မကြာမီ B ကအဖြစ်ကို C/L ကိုထုတ်လုပ်သူကကမ်းလှမ်းနေသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.rain-clothing.com/my/transparent-rain-cover.html
ပွင့်လင်းမိုးဖုံး ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ ပွင့်လင်းမိုးဖုံး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ